iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #7 by Dariussssss
Ngoko, molo wonke. Igama lam uDavide mna Forum imodareyitha entsha. Ndandicinga ukuba eyona ndlela ibhetele ukukhaba-kucima umsebenzi apha ukuvula ngesi sihloko kwaye ukuhlangabezana nonke.
Sixelele ngawe, yintoni na ocinga ukuba ibalulekile.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: rikoooo, PADA52, ricbru, txrace
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #14 by rikoooo
Wamkelekile kwi qela Rikoooo,
I'am Erik umdali kunye nomanejala Rikoooo.com.
Ndivuya Kuluvuyo ngokwenene ukuba kuwe apha, le Forum yakho. nguwe umqeshi
Ndiya kwenza annouce kwincwadana yethu elandelayo ukuxelela wonk 'umntu ngale qonga litsha.
Happy flight wonke
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #15 by andhar
Molweni, igama lam Aan
Mna ungumzondeleli moya evela Indonesia
Ndikulungele ukukuhlangabeza nonke
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #16 by Dariussssss
Enkosi kakhulu nonke kude. Ndiyathemba ke ukuba ndokubona izithuba kakhulu, kokukhona kwaye umsebenzi phi apha elizayo.
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-3 inyanga edlulileyo Dariussssss.
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #35 by FCAIR
Molweni Lonke igama lam Terry (FCAIR) Mna umhlala USAF Crew oyiNtloko. wavuka nje unomdla FSX neSIM luphaphazela emva kweminyaka emininzi. nxuwa Enkulu, ukopisho eyoyikekayo. Happy Flying to wonke
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: rikoooo, Gh0stRider203
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #36 by kolula
Hi - Mna Yohane ukusuka kunxweme ngasezantsi UK. Ngoku umhlala, Simulator yam yokuqala yeflaythi ukubaleka kwi ZX81, zithwele yi tape, kwaye yakhiwe B737 (kakuhle altimeter kunye yeASI) zimelwe yemizobo Blocky kakhulu luphaphazela phakathi block A noonobumba B ezimnyama namhlophe - kwaye ukuba wenza loo nto kanye ukuba wabona "imbonakalo", omnye umqongo abamnyama ekuthiwa C. ezikhuthazayo iimpahla. Ukususela ngoko ndiye wonke Flightsim ukuba Microsoft luvelise, inkqubela ngokusebenzisa iintlobo iikhompyutha ukusuka 8086 ngokusebenzisa 384, 486, Pentium, kunye ezimbalwa ngaphezulu, ukuba I7 yam yangoku. Ndiye ndafumana ilayisenisi yabucala apho ndiya kuba isibini iiyure ezilikhulu kwi 152s kunye PA28s - akusekho yangoku ngenxa yeendleko esiphaphazelayo apha e-UK. Unyana wam naye wasebenzisa Flightsims, wayifumana yebug kwaye ndafunda ukubhabha, kwaye ngoku iiyure 4000 phantsi ibhanti yakhe A319 (wokwenene) / 320s imalunga nje ukuya ngenxa itikiti Captain lakhe. Waya phesheya Rickoooo ngenxa freeware eCanary Islands intle leyo gqitha - ngoko ke enkosi ngaloo. Kakhulu ukubona kwiphepha IsiNgesi njengoko nangona siphila akukho iikhilomitha ngaphezu 50 ukusuka France kakuhle ulwimi yabo ikude lee okulungileyo.
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-3 inyanga edlulileyo kolula.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: rikoooo, alogie
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #37 by rikoooo
Hello FCAIR kunye kolula,
Enkosi intetho yakho kukwamkela apha kule foram entsha, thina ngehlombe kakhulu kwaye ndiyavuya ukuba nani apha, musa ukuthandabuza post izihloko ezitsha kwaye ucele uncedo eluntwini. Kwakhona, xa ufuna ukunceda abanye bekuya kuba mkhulu, ulwazi lwakho ezamkeleke kakhulu apha, yaye singathanda ukuba ezinye izifundo indlela-ukuba, zibhabha, iityhuthoriyali njalo exhonyiweyo kwiforam. igalelo ngamnye uya kuvuyisa kuluntu.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: kolula, FCAIR
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #39 by FCAIR
Ngeli xesha mna kanye njengomfundi njengoko kunangaphambili. Oku kungathatha kum kancinane ukufumana zonke Amahlandinyuka FSX kodwa nanini ndiya kukunceda umntu Kuya kuba mnandi kakhulu kum ukuba enze njalo.
Blue Skies wonke ..
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #44 by Dariussssss
Kwakhona, Wamkelekile Rikooo.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #153 by PAYSON
Hiya, igama lam igama wekhusi PAYSON. Bendikhe usebenzisa simulators computer kangangethuba elithile ngoku, abasusela ikopi lisetyenziswa Ubisoft ngayo Sturmovik IL2. Waya iminyaka 10 kwi WarBirds (eneneni wabanceda kunye moya we ndi_ndingumlwi babefuna ukwazisa emdlalweni. Ndandinxibe kwakhona phandle ezinye peripherals ukudlala Ubisoft ukuba kuliwe sims ophezulu kakhulu. Ndafudukela ukuya kwiminyaka emalunga 5 in World of matanki, nangoku ukudlala ngayo. (ufumana eninzi) Ndakhe kusetyenziswa FSX malunga 8 okanye 9 iminyaka kwaye ndathandana ifomathi yabo. ndiseyilaa abachaphazelekayo Beningazi kwaye nangoku kutolwe-em-phezulu Ubisoft. Ngoku ukuba ubuyazi nina abantu, ukuba kakhulu ukuba ukhetho enkulu moya ukubhabha.
Ixesha ukwenza page: 0.267 imizuzwana